थाहा खबर: स्‍कुल जान नपाएर बालबालिका निराश, भन्छन्- कार्टुन हेर्दाहेर्दै दिक्क लागिसक्यो
काठमाडौं : नाम्गेलकी ७ वर्षीया सोफिया शेर्पा गोलमतीको चण्डिकाश्वरी स्कुलमा पढ्छिन्। युकेजीमा पढ्दै गरेकी उनी यसपालि एक कक्षामा पढ्न पाउँदै थिइन्। तर, कोरोना महामारीले स्कुल बन्द भयो। लकडाउनको करिब २ महिना भइसक्यो। त्यसो त उनलाई अहिले स्कुल जान धेरै मन छ। तर, ती इच्छा र चाहानालाई त्यागेर अहिले घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ उनलाई।
सानै उमेरका बालिका भएकाले उनलाई किन लकडाउन लागेको? कोरोना भाइरस के हो? थाहा छैन। उनी भन्छिन्,‘स्कुल जान नपाएको धेरै भयो। किन स्कुल बन्द गरेका होलान्। स्कुल र कक्षाका साथीहरूलाई धेरै सम्झेको छु।’ घरमा बस्नुभन्दा स्कुल जान नै धेरै मन पराउने गरेको उनले सुनाइन्। ‘स्कुल गयो भने साथीसँग खेल्न पाइन्छ,’उनले मुसुक्कै हास्दै भनिन्,‘पढ्न पाइन्छ। घरमा बस्दाबस्दा त अल्छी लागिसक्यो।’
उनी स्कुलको मिल्ने साथीमा युनिसाको नाम लिन्छिन्। भन्छिन्,‘सबैभन्दा धेरै मिल्ने र मलाई माया गर्ने युनिसा साथी छन्। अहिले के गर्दे होलिन्? कसरी बस्दै छिन् होला? साथी धेरै सम्झेको छु है।’ उनले घरमा बस्दाबस्दै तीनवटा होमवर्क सकाइसकेको बताइन्। ‘घरमा बसेरै तीनवटा होमवर्क सकाइसकेको छु,’उनले भनिन्, ‘अरू पनि गर्नु छ। अझै गर्छु।’
धेरै पढेर डाक्टर बन्‍ने उनको लक्ष्य छ। ‘मलाई पढ्न धेरै मन छ,’उनले भनिन्,‘स्कुल लाग्दाखेरी दैनिक जान्छु। धेर पढे्र डाक्टर बन्ने मन छ।’ घरभित्रै बसेर कार्टुन हेर्दाहेर्दा वाक्कादिक्क भइसकेकाले कहिलेबाट स्कुल खुल्छ र जान पाइन्छ भनेर ती दिन कुरेर उनी बसिरहेकी छिन्। तर, कहिलेबाट स्कुल लाग्छ उनलाई थाहा छैन।
उनका आमा मिङ्मा शेर्पाका अनुसार लकडाउनले अहिलेसम्म पनि रिजल्ट प्रकाशित हुन सकेको छैन।
विद्यालयहरू खुल्नुहुँदैन : अभिभावक
उनलाई छोरीले स्कुल जान धेरै मन लाग्ने गरेको सुनाएको बताइन्। उनले भनिन्,‘अहिले जताततै कोरोना भाइरसको त्रास छ। त्यसैले मेरो छोरी घरभित्रै बस्छिन्। कहिले पढ्छिन्। उनले स्कुल जान धेरै मन गरेकी छिन्।’ उनका अनुसार छोरी सोफिया टिभीमा कार्टुन हेर्ने र पढेर अहिले दैनिकी बिताउँदै आएकी छिन्। लकडाउन र कोरोना महामारीले बालबालिकाको मनोस्थिमा असर पुर्‍याउँछ कि भन्नेमा उनी चिन्तित छिन्।
उनले कोरोना संकट हटेपछि मात्रै स्कुल सञ्चालन गर्ने सुझाव दिइन्। ‘कोरोना भाइरसको महामारीले सबै विद्यालयहरु बन्द छन,’उनले भनिन्,‘यस्तो बेला विद्यालयहरू खुल्नुहुँदैन। यो संकट हटोस् त्यसपछिमात्र स्कुल सञ्चालनमा आओस्। अनि छोरीलाई पनि स्कुल पठाउँछु।’
जिपको ठक्करबाट वृद्धाको मृत्यु
अन्धोपनविरुद्ध लड्न डा.रुइत र कोहलीबिच सहकार्य
करेन्ट लागेर भक्तपुरमा युवकको मृत्यु